Lezi yizo zonke izindaba ezivela kwaGoogle zango-2019 | Izindaba zamagajethi
Lezi zonke izindaba ezivela kuGoogle zango-2019
IGoogle ibibambe izolo, ingqungquthela yaminyaka yonke lapho yethula khona konke izindaba ezizofika unyaka wonke ngesimo samadivayisi, imisebenzi, izinhlelo zokusebenza, izinhlelo zokusebenza ezintsha ... Sesifinyelele eqophelweni lapho ukuqamba izinto ezintsha sekuyinto eyigugu futhi iGoogle, njenge-Apple phambilini, ingasibonisanga ngomsebenzi ongavula izingqondo zethu.
Ngaphezu kokwethula ngokusemthethweni i-Android Q, noma ingazange iveze igama eligcwele lenguqulo elandelayo ye-Android, abafana bakwaSundai Photosi nabo bethule amatheminali amabili amasha: I-Google Pixel 3a ne-3a XL, amatheminali amabili anomklamo weminyaka emithathu edlule, lapho amafreyimu aphezulu, ezansi nohlangothi ekhanya ngokweqile. Ngaphezu kwalokho, intengo yayo ayihambisani nokuningi.
1 Yini okusha ku-Android Q
1.1 Izimpendulo ezizenzakalelayo kuzaziso
1.2 Imodi emnyama
1.3 Ukuthinta okusha ukusebenzisana nedivayisi
1.4 Ukuhambisana kwe-smartphone okusongekayo
1.5 Umsizi weGoogle uyatholakala esigungwini
1.6 Ama-Smartphones ahambisana ne-beta ye-Android Q
2 IGoogle Pixel 3a nePixel 3a XL
3 I-Duplex, isinyathelo esisodwa ngokuqhubekayo
4 I-Nest Hub Max
Yini okusha ku-Android Q
Yize inguquko elandelayo ye-Android, Q, ibinathi izinyanga ezimbalwa, kuze kube manje, i-giant search ibingakamemezeli ngokusemthethweni lolu hlobo olulandelayo. Kulesi sehlakalo, amanye amafayela we- izindaba ezizovela esandleni sohlobo olulandelayo lohlelo lokusebenza lwe-Android for Smartphones ehambisanayo.
Ngokwethulwa kwe-Android Pie, umbono kwakuwukuthi ngenxa yeProjekthi Treble, ukwamukelwa kwale nguqulo ye-Android kungashesha kakhulu ngabasebenzisi, kepha ezinyangeni eziyisishiyagalolunye kamuva, I-Android Pie itholakala kumadivayisi ayi-10%, izibalo ezinethemba elincane kakhulu lezimangalo zeGoogle.
I-Project Treble ukubheja kweGoogle ukusheshisa izibuyekezo, ngoba inkampani iqinisekisa ukuthi uhlelo olusebenzayo uhambisane nazo zonke izingxenye ze-smartphone, kushiya abakhiqizi kuphela ukuthi bavumelanise ungqimba lwabo ngokwezifiso.
Izimpendulo ezizenzakalelayo kuzaziso
Usuku lonke sithola inqwaba yezaziso, ezinye zazo ezingeke zibe usizo kithi ngesikhathi esithile. Nge-Android Q, ukuphathwa kwezaziso, uma ngabe bekuvele kukuhle ngokwakho, manje iba ngcono kakhulu, ngoba izosivumela ukuthi sithulise izaziso zezinhlelo ezithile zokusebenza ngesikhathi esakhiwe ngaphambilini.
Ngale ndlela sizokwazi ukwenza kusebenze imodi yokungaphazamisi, kepha sivumela uhlelo oluthile lokuthumela imiyalezo, ngokwesibonelo, ukusazisa ngemilayezo emisha, umsebenzi ilungele lapho singakwazi ukukhuluma ocingweni futhi silindele umyalezo noma i-imeyili.
Enye yezinto ezithakazelisa kakhulu enguqulweni elandelayo ye-Android, kuzoba izimpendulo ezizenzakalelayo ezitholakala kuzaziso. Ngale ndlela, sizokwazi ukuphendula ngokushesha ngaphandle kokuvula i-terminal, faka uhlelo bese ubhala impendulo. Lo msebenzi ufana kakhulu nalowo esivele sinawo ngqo nge-Gmail.
Abanye abasebenzisi bakholelwa ukuthi imodi emnyama isivele itholakale ngokwendabuko ku-Android, ngenxa yokuthi abanye abakhiqizi bayinikeze ngongqimba wabo wokwenza ngokwezifiso, kepha akunjalo. Ngokwethulwa kwe-Android Q, iGoogle izonikeza ithuba lokusebenzisa imodi emnyama kusiginali yethu ehambisanayo, imodi emnyama leyoI-e izoqinisekisa ukuthi zonke izinhlelo ezikhona ziyazisebenzisa ngokuzenzekelayo uma icushiwe.
Imodi emnyama, ngaphezu kwe-aesthetics entsha esisinikeza yona, kusivumela ukuthi songe inani elikhulu lebhethri inqobo nje uma i-terminal yethu isebenzisa isikrini sohlobo lwe-OLED, kusukela lobu buchwepheshe Vula Ama-LED kuphela abonisa umbala ngaphandle komnyama. Ngale ndlela, uma iningi le-interface, kufaka phakathi ingemuva limnyama, akudingekile ukukhanyisa isikrini sonke njengoba kwenzeka ngezikrini zendabuko ze-LCD.
Ukuthinta okusha ukusebenzisana nedivayisi
Ngokukhishwa kwe-Android Pie, I-Google iqale ukwethula ukuthinta esikrinini ukwazi ukuzungeza uhlelo olusebenzayo, ngenxa yesidingo sabakhiqizi, ngoba iningi labo lalikhethe noma lalenza izinkinobho ezihambe nathi kusukela izinhlobo zokuqala ze-Android zinyamalale. Yize kuyiqiniso ukuthi eziningi zazo ziyafana nalezo ezethulwe i-Apple nge-iPhone X, empeleni umthombo wokhuthazo lwe-Apple kwakuwukuqhekeka kwejele noPalm.
Ukuhambisana kwe-smartphone okusongekayo
Ngenkathi abakwaSamsung bethula i-Galaxy Fold, inkampani yaseKorea yathi isebenzisane neGoogle ukuzivumelanisa I-Android yalolu hlobo lwezikrini kanye nezinzuzo abasinikeza zona uma kuqhathaniswa nezikrini ze-smartphone. Njenge-notch yamanye amatheminali, i-Google kuye kwadingeka ukuthi ivumelanise i-interface yayo nalolu hlobo lwe-terminal.
Umsizi weGoogle uyatholakala esigungwini
Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza zeselula, njenge-iOS, ukuze ukwazi ukusebenzisa umsizi womuntu siqu, asikho isidingo sokuba nokuxhumeka kwe-inthanethi, ukuze kuthi uma sisebenzise imodi yendiza noma singenakho ukumbozwa, sizokwazi ukucela iGoogle ukuthi isibonise izithombe ezithile, ukwenza kusebenze noma kungasebenzi imodi ethile yesiginali yethu, ukugcina inombolo yocingo ...
Futhi, lapho siqala ingxoxo ne-Google, umsizi uzobe elinde imizuzwana embalwa ukuthi ahlole uma sifuna ukubuza umbuzo owodwa noma noma senelise isidingo sethu noma ilukuluku lesikhashana, ukugwema lokho kufanele sincenge umsizi kaninginingi lapho sifuna ukubuza imibuzo eminingana.
Ama-Smartphones ahambisana ne-beta ye-Android Q
Ngonyaka odlule, inani lamatheminali ahambisana ne-beta yokuqala ye-Android Pie lalilincane kakhulu, lilinganiselwe kumamodeli we-7 kuphela. Ngalesi sikhathi, I-Google ikwazile ukuheha abakhiqizi abaningi kulolu hlelo lwe-betaNgakho-ke, inani lama-Smartphones ahambelana ne-beta ye-Android Q, futhi okuzobe sekuphakathi kwezokuqala ezizovuselelwa kunguqulo elandelayo ye-Android, ngu-21:
I-Google Pixel / XL, i-Pixel 2/2 XL, i-Pixel 3 / 3XL, i-Pixel 3A / 3A XL
IVivo X27, Vivo Nex S neNex A
I-Xiaomi Mi 9, i-Xiaomi Mi Mix 3 5G
I-Asus Zenfone 5Z
I-LG G8 ThinQ
I-Realme 3 Pro
I-Sony Xperia XZ3
I-TecnoSpark 3 Pro
IGoogle Pixel 3a nePixel 3a XL
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, iGoogle uqobo ibonile ukuthi ukuthengiswa kwePixel 3 ne3 XL bekungalindelekile njengoba kunjalo, kepha kubonakala sengathi i-giant search isabheja ukuqala ama-smartphone ayo. Vele bafuna ukufinyelela izithameli ezibanzi futhi ngalokhu baveze umcimbi i-Pixel 3a entsha ne-3a XL, ama-smartphones amabili anomklamo ongathandeki kepha lokho Basinikeza cishe imisebenzi efanayo nePixel 3 ne3 XL.
Vele, amamodeli amasha awahlanganisi i-Visual Core, iprosesa ebhekele ukucubungula okuthathwe okwenziwe yinkampani yenkampani futhi etholile ukubuyekezwa okuhle okunjalo kwabezindaba. Uma sibheka leyo ngqangi ngaphezu kwentengo yamatheminali womabili, ama-euro angama-399 kanye nama-479 ngokulandelana, futhi ukwakheka kubonakala kimi ukuthi akukho okuncane noma okuncane okuzokwenza iGoogle ithole lawa ma-terminals. Ngaphezu kwalokho, Zenziwe ngepulasitiki futhi azihlinzeki ngohlelo lokushaja olungenantambo.
Iningi labasebenzisi lithembele kubuhle besiginali lapho siyithenga, sishiya eceleni izinzuzo. Yilokho kuphela esikuqonda kakhulu ngale ndaba, asibheki ekwakhiweni kuphela, kodwa futhi nakwezici, amandla, iprosesa, isitoreji, izinto zokwenziwa ... Emakethe zombili iXiaomi neHuawei noma iSamsung zisinikeza amatheminali efanayo ekusebenzeni kwezobuchwepheshe kepha idizayini ekhanga kakhulu kunePixel 3a ne3a XL.
Ngokusobala uma ingaphandle lingenandaba nawe, kungenzeka ukuthi bonke labo abasinikeza ngaphakathi uma wenza kanjalo. IGoogle Pixel 3a entsha isinikeza uhlelo lokushaja okusheshayo olunemizuzu engu-15 kuphela yokushaja olusinikeza ukuzimela okufika emahoreni angu-7. Ikhamera izosivumela ukuthi sithwebule yonke imininingwane nemibala ebumnyameni ngaphandle kokusebenzisa i-flash, futhi ngenxa yezithombe ze-Google, singagcina konke okuqukethwe kumahhala ngokuphelele efwini.
Njengenjwayelo, iGoogle isinikeza izibuyekezo zezokuphepha nezokusebenza iminyaka emithathu, ngoba i-terminal yethu ivikelekile njalo nokusebenza kwayo kulungile. Yize namuhla kubonakala kuyinto encane, ifaka ichweba lekhanda. Lapha sikukhombisa imininingwane ephelele ye-Google Pixel 3a ne-Google Pixel 3a XL.
Umehluko okuwukuphela kwawo oyinhloko utholakala kufayela le- usayizi wesikrini, njengoba iPixel 3a inesikrini esingu-5,6-intshi ngenkathi i-3a XL ifinyelela kuma-intshi ayi-6, zombili izikrini ngobuchwepheshe be-OLED. Ngaphandle kokubonisa ozimele abaphanayo, inzwa yezigxivizo zeminwe iyatholakala ngemuva kwesiginali.
I-GOOGLE PIXEL 3a XL
ISIKRAYILI I-5,6-intshi OLED enesisombululo se-FullHD + (amaphikseli we-2.220 x 1.080) kanye no-18,5: 9 screen ratio I-6-intshi OLED enesisombululo se-FullHD + (amaphikseli we-2.160 x 1.080) kanye no-18: 9 screen ratio
INKULUMO I-Snapdragon 670 ene-Adreno 615 GPU I-Snapdragon 670 ene-Adreno 615 GPU
UKUGCINWA KWANGAPHAKATHI 64 GB 64 GB
IKHAMERA EMUVA I-Sony IMX363 ye-12,2 MP ene-f / 1.8 ne-OIS + EIS I-Sony IMX363 ye-12,2 MP ene-f / 1.8 ne-OIS + EIS
IKHAMERA LANGAPHAMBILI I-8 MP enokuvula kwe-f / 2.0 I-8 MP enokuvula kwe-f / 2.0
IBATTERY I-3.000 mAh ene-18W Charge esheshayo I-3.700 mAh ene-18W Charge esheshayo
ISISTIMU ESEBENZAYO I-Android 9 Pie I-Android 9 Pie
UKUXHUMANISA I-USB-C 2.0, i-nano SIM, i-WiFi ac 2 × 2 MIMO, i-Bluetooth 5.0, i-Aptx HD, i-NFC, i-Google Cast, i-GPS, i-GLONASS I-USB-C 2.0, i-nano SIM, i-WiFi ac 2 × 2 MIMO, i-Bluetooth 5.0, i-Aptx HD, i-NFC, i-Google Cast, i-GPS, i-GLONASS
ABANYE Isifundi seminwe engemuva, i-3.5mm jack, i-Active Edge Isifundi seminwe engemuva, i-Active Edge, i-3.5mm jack
Ubukhulu nobukhulu X x 151,3 70,1 8,2 mm
I-147 amagremu X x 160,1 76,1 8,2 mm
I-PRECIO I-399 euro I-479 euro
I-Duplex, isinyathelo esisodwa ngokuqhubekayo
Ubuchwepheshe be-Google Duplex basikhombisa ngonyaka odlule ukuthi kungenzeka kanjani bhuka itafula endaweni yokudlela ngocingo usebenzisa i-Google Assistant. Abafana bakwaSundai Photosi bafuna ukuqhubekisela phambili lobu buchwepheshe futhi babusebenzise kuwebhu. Ngale ndlela, umsizi uzokwazi ukufaka imininingwane yethu, ngokwesibonelo, ukugcina imoto, ebheka izinsuku zohambo esizihlelile ngaphandle kokwenza noma yini kulolu hlelo.
I-Nest Hub Max
I-Google ikwazile ukufaka amakhaya amaningi ngeKhaya leGoogle, isikhulumi esihlakaniphile senkampani, kepha ibingenayo idivaysi ehlakaniphile enesikrini okuhloswe ngaso kakhulu ukuphatha ikhaya elihlakaniphile, njengeNest Hub Max, ithuluzi esingenza ngalo izingcingo zevidiyo ngokusebenzisa iGoogle Duo sibonga ikhamera edidiyelwe ebanzi, ukusebenzisa i-inthanethi, ukubuka ithelevishini ... iNest Hub Max, ukuzibophezela kwakho kulo mkhakha, lapho I-Amazon isivele inikela ngamadivayisi amaningi, njengoba kwenza i-Facebook ne-Portal.
Lolu hlobo lwedivayisi esingalubeka kunoma iyiphi ingxenye yendlu, lwenzelwe ukuthi lusetshenziswe ekhishini. Ihlanganisa isikrini esingu-1 intshi futhi isinikeza ukufinyelela kuwo wonke umhlaba wakwa-Google ngokusebenzisa ipaneli yokuthinta. I-Google isebenzise ubuchwepheshe be-Nest, inkampani eyenza amakhamera ezokuphepha nokuthi ithenge eminyakeni embalwa eyedlule, kule divayisi.
INest Hub Max izotholakala ehlobo ngama- $ 229 e-United States, kodwa-ke, inkampani ithi ezinyangeni ezizayo, izotholakala nakwamanye amazwe ayi-12. phakathi kwawo kukhona iSpain, yize singazi ukuthi izotholakala ngamanani muni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Lezi zonke izindaba ezivela kuGoogle zango-2019
Sikunikeza IZINYANGA EZITHATHU ze-Amazon Music Unlimited [Ukunikezwa]
Ukuhlaziywa kwesikhulumi se-Urban Box 7 esivela ku-Energy Sistem